စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 7:48 PM
သာဓု သာဓု သာဓု လူ့ အကျိုးပြုရေးသားတင်ပြချက်အတွက် ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်..
အန်တီ.. အရမ်းကို အဖိုးတန်တဲ့ဆောင်းပါးလေး ပါပဲ. ခုလို အမြင်လွဲမှားနေသူတွေ အတွက် အမြင် လေးရလိုစိတ်နဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ နေ၍ ဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ အဆုံးအမ နှင့် ဗုဒ္ဓစာပေတွေထဲကနေ ပြန်လည်ပြီး ရေးသား မျှဝေမှုအတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ပါတယ်အန်တီ. အန်တီလည်း ဆက်လက်ပြီး အများအကျိုး မိမိအကျိုးကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး နိဗ္ဗာန်ထိ အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ ပါရမီထူးများ ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်နိုင်ပါစေလို့...
အန်တီ နောက်ထပ်လည်း တင်ပါအုံးနော်။ ဖတ်ရတာ တန်ဖိုး၇ှိလွန်းလို့ပါ။
လှူတတ်ဖို့ တကယ်လိုနေပါတယ်. မိမိအကျိုးရှိဖို့ထက် တဖက်လူ အကျိုးကို မျှော်ကိုးပြီး လှူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.
မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် စုပြုံလှူနေတာထက် တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေကို လှူတတ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်..